Ogaden News Agency (ONA) – Hogaamiyihii Catalonia oo Booliska Belgium Isu Soo Dhiibay.
Hogaamiyihii Catalonia oo Booliska Belgium Isu Soo Dhiibay.
Posted by ONA Admin	/ November 6, 2017
Dacwad oogayaasha dalka Belgium ayaa xaqiijiyay in hogaamiyihii shaqada laga caydhiyay ee Gobolka Catalonia , Carles Puigdemont, iyo 4 xubnood oo horey uga tirsanaa golihiisa wasiirada ay isu dhiibeen booliiska dalka Belgium.
Garsoore u dhashay dalka Spain ayaa horey u soo saaray warqad lagu soo xidhayo hogaamiyayaashani oo lagu eedeeyay in ay ku kaceen falal mucaardnimo dalkana ay khiyaaneen. Dacwad oogayaasha dalka Belgium ayaa go’aan ka gaadhi doona maalinta maanta codsiga Spain ee ah in hogaamiyayaashani la xidho.
Mr Puigdemont ayaa sheegay in uusan dib ugu laaban doonin dalka Spain ilaa uu ka helayo damaanad qaad ku aadan in uu helayo maxkamadayn u dhacda si xaq ah.
Dhanka kale Kumanaan qof oo ah dadka ree Catalonia ayaa isugu soo baxay magaalada Barcelona ee dalka Spain. Dadkan ayaa waxay dalbanayaan in la siidayo wasiiro hore oo ka mid ahaa dadkii tageersanaa aftidii madaxbanaanida kuwaasi oo ay xidhay xukuumadda Spain.
Dadka dibaxa dhigaya ayaa waxa ay u arkaan hogaamiyayaashani xidhan in ay yihiin maxaabiis siyaasadeed. Sideed siyaasi ayaa la xidhay waxaana ku socda baadhitaan la xidhiidha in ay ku kaceen falal mucardnimo iyo khiyaano qaran.